तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल : असार ११ गते
Homeतपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल : असार ११ गते
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असोज ७ गते, आइतबार
September 23, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असोज ७ गते, आइतबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने धनआगमनको गतिलो योग रहेको छ । बैक तथा वित्तीय क्षेत्र सँग सम्बन्धित कारोबारहरू बढेर जानेछ । तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असोज ४ गते, बिहीबार
September 20, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असोज ४ गते, बिहीबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : समाजसेवा तथा राजनीतिमा समय दिनेहरूले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको सहयोग पाउनेछन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानीका बाटाहरू फराकिला हुनेछन् । अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बौद्धिकताको सबैले […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल भदौ ९ गते, शनिबार
August 25, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल भदौ ९ गते, शनिबार
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पछि लाभ हुने कामको थालनी गर्न सकिनेछ भने शरीरमा घाउ,खटिरा तथा चोटपटकको भए रहनेछ । आफन्त सँगको लेनदेन कारोबारले शत्रुत्रा बढ्नेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाव बढ्ने तथा श्रीमान् श्रीमती बिचको सम्बन्धमा उतार चढाब […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २६ गते, शनिबार
August 11, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २६ गते, शनिबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : आमा तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सल्लाह तथा सुझाव पाइने हुनाले सुधारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी हुनेछ । सामाजिक काममा समय दिनु पर्नेछ भने तपाईँको कामदेखि सबै खुसी हुनेछन् […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २१ गते, सोमबार
August 6, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २१ गते, सोमबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ । आफन्तबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ । खोज तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा खर्चियको समयबाट सकारात्मक नतिजा आउने हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ भने अध्यन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा अरूभन्दा […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २० गते, आइतबार
August 5, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल साउन २० गते, आइतबार
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : बन्द व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ भने आस मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। आफन्त तथा साथीभाइहरूको सहयोगमा विशेष योजनाहरू बन्नेछन्। छिमेकी तथा समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछ। सामाजिक […]
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार ३१ गते, आइतबार
July 15, 2018 Spnews Comments Off on तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस राशिफल असार ३१ गते, आइतबार
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,बि,वू,वे,वा) : समाजमा गुमेको साख फिर्ता हुनुको साथै आफ्नो वर्चस्व बढाउन सकिनेछ । समयको भरपुर सदुपयोग गरी भाग्य वृद्धि गर्न सकिने साथै दिगो फाइदा हुने काम आरम्भ गर्न सकिनेछ । नियमित काममा दाजुभाइ तथा आफन्तको […]